Ikhaya lelizwe elinomtsalane kufutshane nepaki yesizwe
Indlu yelizwe epholileyo neneatmospheri yelizwe eyilwe yaza yakhiwa ngabanini ngokuzinikela nangothando, ngoncedo olongezelelweyo oluvela kubantwana babo nakwizihlobo. IArnarstapi, yidolophana encinane ekulotywa kuyo enedokhi elihle apho abalobi basekuhlaleni bagcina khona amaphenyane abo. Indlu imi kumganyana nje omfutshane ukusuka kwicala elibukekayo lewa kufutshane nepaki yesizwe entle enomkhenkce omangalisayo iSnæfellsjökull.
Indlu yayiyilwe yaza yakhiwa ngumninimzi uEinar. Ungumakhi obalaseleyo kwaye uhlaziye uninzi lwezindlu ezindala kwiziko laseReykjavik. Indlu iye yakhiwe ngeendlela zemveli kunye neenkcukacha ezenziwe ngesandla, ezenza ukuba zibukeke isitayela esidala kwaye zinike imvakalelo yokuba sele ikhona ixesha elide nangona entsha.
Le ndlu ikufuphi nepaki yelizwe entle ene-glacier eyaziwayo iSnæfellsjökull, enomxholo wenoveli kaJules Vernes ethi "Uhambo oluya kwiziko loMhlaba". IArnarstapi, yidolophana encinane ekulotywa kuyo enedoki elihle apho abalobi basekuhlaleni bagcina khona amaphenyane abo. Kukho indlela ebukekayo yokuhamba ngakunxweme olunamatye ukuya kwilali eselumelwaneni iHellnar. Kukho amasimi amahle odaka kufutshane nendlu kwaye umqolomba onzulu umi kwiPaki yeSizwe esanda kuvulelwa uluntu. Indlu eKhanyayo (iMalarrif) kunye nolwakhiwo oluhle lwamatye (iLóndrangar) zikwindawo ebumelwaneni.
Indlu ese-Arnarstapi likhaya lesibini lika-Einar no-Anna kwaye bakholisa ukuhlala eReykjavik ngelixa kukho iindwendwe endlwini. Ungafikelela kuAnna nge-imeyile: (IMEYILI EFIHLILEYO) okanye ngefowuni: +(INOMBOLO YOMnxeba EFIhliwe). UEinar uyafumaneka nasefowunini, inombolo yakhe ithi +(INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO).
Indlu ese-Arnarstapi likhaya lesibini lika-Einar no-Anna kwaye bakholisa ukuhlala eReykjavik ngelixa kukho iindwendwe endlwini. Ungafikelela kuAnna nge-imeyile: (IMEYILI EFIHLILEYO…